Orinasa mpanamboatra tavoahangy vita amin'ny tavoahangy China malefaka | SJJ
Ny mpamaky tavoahangy malefaka amin'ny PVC dia matetika ataon'ny fonosana malefaka sy ny fanokafana vy. Ny ampahany PVC dia natao tamin'ny alàlan'ny fitaovam-piarovana malefaka PVC, amin'ny habe samihafa, endrika maro samihafa amin'ny alàlan'ny fanariana maty. 2D na 3D dia azo atao tsy amin'ny lafiny iray ihany, fa amin'ny lafiny roa ihany koa. Hita tao amin'ny `` https://mg.wiktionary.org/w/index.php?title=fifampikorohanay&oldid=18879716 ''
Ireo mpamaky tavoahangy Soft PVC dia ampiasaina matetika amin'ny fotoana rehetra ho toy ny entana fampiroboroboana, fahatsiarovana na fanomezana. Malaza izy ireo ao amin'ny bara, fianakaviana, sekoly, fanasana, fampiroboroboana, fanomezana, fivarotana, fahatsiarovana sns. Ireo mpamaky tavoahangy Soft PVC dia azo entina amin'ny vata fampangatsiahana any ivelany miaraka amina andriamby, na mitondra miaraka aminao amin'ny peratra fanalahidy, na rojo lehibe. firaiketam-po. Ny fitaovana ara-tontolo iainana dia afaka mandalo fitsapana USA na Eoropeana.
Fitaovana: PVC malefaka + Metal
Antony: Die Struck 2D na 3D amin'ny lafiny tokana na roa
Loko: Misy ny loko PMS rehetra, maro loko
Safidy fampiraisana mahazatra: andriamby mahery, andriamby malefaka, peratra fanalahidy, Rohy vy, rojo vy, rojo vy ary sns.
Teo aloha: Sarona fanalahidy PVC malefaka
Manaraka: Sarin'ny sary malefaka PVC
Mpanokatra tavoahangy 3D
Keychain mpanokatra tavoahangy
Keyring mpanokatra tavoahangy
Mpanokatra tavoahangy manokana
mpanokatra tavoahangy namboarina
Mpanokatra tavoahangy rojo vy
Mpanokatra tavoahangy Pvc
Filalaovana lakilen'ny mpamoha tavoahangy